Etazonia: Hajian’ny Idy miteraka fankahalana any Tennessee · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2009 16:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, русский, Español, 繁體中文, 简体中文, Swahili, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Andian'ilay hajia taona 2008 , nialoha ny fiakaran'ny vidim- piainana
Raha eo am-pankalazana ny Idy al-Fitr, manamarika ny fiafaran'ny volana Ramadany, indrindra ny Miozolomana any Etazonia, dia mivezivezy haingana dia haingana any ny rojon'imailaka feno fanaratsiana. Miampanga lainga ny filoha Obama ho mamoaka hajia vaovao fahatsiarovana ny Idy roa sosona ilay imailaka ary mandrisika ny mpamaky azy hanao ankivy ilay hajia, noho ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'i Etazonia nandritra ny roapolo taona. Hitanao ao amin'ny lahatsoratr'i Missives from Marx, izay nilazany ny fahasorenany rahateo, ny lahatsoratra feno fanaratsiana iray manontolo:
Nahazo ity mailaka manaraka ity avy tamin'ny havako aho. Noho itony zavatra itony indrindra no mahatery ahy handany efatra herinandro any amin'ny Anjerimanontolo, mandritra ny taranja fivavahana tandrefana no hanapotehana ny fampahafantarana ratsy momba ny Islam. Tsy maintsy atao zava-dehibe mandritra ny fampianarako manontolo ny fananana saina mahay mamakafaka.
Rehefa jerena ihany koa dia tsy misy zava-baovao loatra mikasika ilay taratasy, na ilay hajia. Azavain'ny About.com fa efa nivezivezy teny hatrany ity taratasy ity hatramin'ny taona 2002 raha kely indrindra, nefa efa tamin'ny 1 Septambra 2001 no nivoahan'io hajia io.
Velabelarin'i Aziz Poonwalla ao amin'ny bolongan'ny BeliefNet City of Brass, ny tantaran'ity imailaka ity:
Tratra hatrany taloha ny (laingan)'itony imailaka, nivezivezy an-tserasera nandritra ny taona maro itony, nefa dia mbola indro eo ihany ry zareo. Efa nazoto namaham-bolongana ny momba ny tantaran'ny hajian'ny Idy, ny adi-hevitra naterany teo am-pivoahany voalohany (matetika ny Repoblikana mpitazona nentim-pahazarana no tia hiady hevitra azy ity), ary ny fiarovan-tena nataon'ny filoha Bush sy ny Mpitondra teny Hastert aho. Raha fehezina, tamin'ny 1 Septambra 2001, folo andro mialoha ny fanafihan'ny 9-11 no nivoahan'ny hajia, nandritra ny fitondran'i Bush. Tafiditra ao amin'ny lisitry ny manao politika mpandala ny nentim-pahazarana tsy manakana ny isian'ny hajia ho fahatsiarovana (na fankalazana) ny Hanukkah, Kwanzaa, eny fa na dia ny teh taombaovaon'ny Shinoa aza ny Ben'ny tanàna Piper – fa manavaka ny hajian'ny fankalazana ny fety miozolomana Idy kosa ho mampatahotra, ka mila valinteny avy amin'ny “tia tanindrazana” Amerikana?
Lahatsoratra iray hita ao amin'ny Clarksville Online, bolongana ho an'ny tanànan'i Clarksville, Tennessee, no ahitana ny mahatonga ny imailaka hivoaka lohateny lehibe amin'ny gazety tamin'ity taona ity:
Nandefa imailaka mirehidrehitra mamely ny miozolomana ho an'ny mpiasa ao amin'ny tanàna, sy mandrisika ny hanaovana ankivy ny hajia avoakan'ny paositr'i Etazonia ny Ben'ny tanànan'i Clarksville Tennessee, Johnny Piper…
…Niezaka ny nanamari-tena amin'izay ataony ny Ben'ny tanàna Piper hatramin'io fotoana io, saingy tsy fiaro velively ny heviny. Efa singa anatin'ity firenena ity ny Miozolomana. Nanompo amim-pahamendrehana ny firenentsika sy ny fahafahantsika izy ireny. Tsy misy sokajin'olona azo atao ho ambinambin'olom-pirenena, noho ny finoany, na noho ny hadalan'ny extremista sasantsasany. Miteraka henatra ho an'ny tananantsika, ny fanjakantsika ary ny firenentsika ity nataon'ny Ben'ny tananantsika ity.
Nozohin'i Sheila Musaji tao amin'ny The American Muslim (TAM) ny fihodin'ilay rojon'imailaka hatramin'ny 2005 no mankaty, ary tamin'ny fanakotrihana nataony, no nanamarihany ny fihetsika mihoam-pampana nataon'ny Ben'ny tanàna Piper:
Hitako tsara hoe hanakory ny hagagan'ny Ben'ny tanàna raha mahalala ny nanaovan'ny filoha Obama Iftar (fanapahana fifadian-kanina) tao amin'ny Trano Fotsy(fr: Natomboky ny filoha Clinton).
Ary mazava loatra fa ho fiarovan-tenany tahaka ny mpivavaka tery saina rehetra dia hoe: “Manana namana miozolomana ihany koa aho,” hoy ny fanampi-teniny.”
Angamba afaka manazava azy tsara hoe nahoana no manohintohina ITY (PDF).
Afrika Mainty 1 andro izay